Romelu Lukaku Oo Daboolka Ka Qaaday Magacyada LABA Ciyaartoy Oo Uu Uga Tegay Manchester United & Sidii Xumayd Ee Loola Dhaqmay - Gool24.Net
Weeraryahanka Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa daboolka ka qaaday magacyada labadii ciyaartoy ee sababta u ahaa inuu iskaga tago Manchester United, isla markaana sida xun ula dhaqmay intii uu joogay kooxdaas.
Lukaku waxa kale oo uu magacaabay laba ciyaartoy oo kale oo iyagana uu isagu kula taliyey inay iskaga tagaan Manchester United kaddib dhibaatooyinkii uu isagu lasoo kulmay, kuwaas oo ugu dambayntii ay ku midoobeen Inter Milan.
Xiddiga reer Belgium ayaa ku eedeeyey Paul Pogba iyo Anthony Martial inay isbahaysi ka wadaan gudaha Manchester United oo ay iyagu si gaar ah kubadda iskugu dhiibaan, isla markaana ay iska indho tiraan ciyaartoyda kale ee fursadaha hasyta.
Lukaku oo Manchester United ka tegay August 2019 kaddib markii ay Inter Milan ka bixisay lacag dhan £72 milayn oo Gini, waxay mar kale isku koox noqdeen Ashley Young iyo Alexis Sanchez oo iyaguna ka yimid Old Trafford, laakiin Lukaku ayaa labadan ciyaartoy kula taliyey inay iskaga tagaan United oo ay Inter Milan si rasmi ah uga wada mid ahaadaan.
Alexis Sanchez ayaa uga sii horreeyey Lukaku oo sii joogay Inter Milan, laakiin waxay ahaayeen waqti amaah ah, ka hor intii aanu xagaagii dhowaanta tegay si rasmi ah ugu biirin.
Romelu Lukaku ayaa xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee Inter Milan waxa uu dhaliyey 34 gool oo dhamaan tartamada ah, waxaanay u ahayd mid wanaagsan oo uu qaab farxadeed ku dhamaystay.
Sida uu qoray wargeyska La Republicca ee kasoo baxa Talyaaniga, Lukaku waxa Manchester United uu uga tegay Paul Pogba iyo Anthony Martial oo kubadda siin waayey, isla markaana iyagu si gaar ah u wada ciyaarayay.
Inkasta oo aanu wargeysku xusin hadal toos ah oo uu kasoo xigtay Romelu Lukaku, haddana waxa uu warkiisa ku sheegay in labada ciyaartoy ee Faransiiska u dhashay ee Pogba iyo Martial ay si xigtinimo ah u wada ciyaarayeen oo ay isagana ka dhigeen go’doon iyo in xataa kubbadaha aanay siinayn waqtiyada munaasibka ah, taasina keentay bixitaankiisa.
Waxa kale oo uu La Republicca xusay in Young iyo Sanchez ay qaateen talooyin uu siiyey Lukaku oo ahaa inay Inter Milan waqti kusii wada qaataan, gaar ahaan Ashley Young oo iyadoo xili ciyaareedkii hore badhtanka marayo ka tegay Serie A.